Khilaaf ka dhashay xeerka uu Madaxweynuhu dib ugu dhigay wax ka bedelka dastuurka | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Khilaaf ka dhashay xeerka uu Madaxweynuhu dib ugu dhigay wax ka bedelka dastuurka
Khilaaf xoog leh ayaa ka dhashay xeerka uu Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wax ka bedelka dastuurka ugu dib dhigay Baarlamaanka 11aad ee soo socda.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa si weyn ugu kala qaybsamay tallaabada uu Madaxweynuhu dib ugu dhigay wax ka bedelka dastuurka, iyagoo qaarkood ku dooday inay liddi ku tahay shaqada Baarlamaanka, halka qaar kalana ay ku doodayaan in Madaxweynuhu uu amuurtaasi xaq u leeyahay, bacdamaa aanu waqti jirin.
Xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh (Beene Beene) oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa sheegay in Baarlamaanka oo keliya uu go’aamin karo, wax kastoo sharciga la xiriira.
Waxaa uu sheegay in Baarlamaanka ay ahayd inuu arrintaasi ka fariisto, uuna soo saaro go’aan uu dib ugu dhigaayo wax ka bedelka dastuurka.
“Qodobka uu Madaxweynaha jebiyay waxay tahay arrinta sharci dejinta ee Baarlamaanka shuruucdiisa ka mid tahay, waxyaabaha ay anaga shaqadeena tahay waaye qodobkaas uu jebiyay.” Ayuu yiri Xildhibaan Beene Beene.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo isna ka tirsan Golaha Shacabka ayaa qiil u yeelay waxa Madaxweynaha ku riixay in wax ka bedelka dastuurka lala suggo Baarlamaanka soo socda.
“Madaxweynuhu ka dib markii uu arkay in waqtigii aanu saamaxeynin oo Baarlamaankii 10aad wax kaga bedelo dastuurka, wuxuu gartay in Baarlamaanka 11aad loo gudbiyo dastuurka wax ka bedelkiisa.” Ayuu yiri Xildhibaan Jeesow.
Khilaafka cusub ee ka dhashay dib u dhigista wax ka bedelka dastuurka qabyo qoraalka ayaa caqabad kale ku noqon kara doorashooyinka uu khilaafka xoogani wiiqay.
Khilaaf ka dhashay xeerka uu Madaxweynuhu dib ugu dhigay wax ka bedelka dastuurka was last modified: December 26th, 2020 by Admin
Jabuuti oo koox xaqiiqo raadin ah u dirtay xuduudda Somaliya iyo Kenya
Faah-faahino: Qaraxyo lagu weerarey Degmooyinka Gobalka Benaadir